पानी नपर्दा चलिचित्र आमाको शुटिङ रोकियो ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
पानी नपर्दा चलिचित्र आमाको शुटिङ रोकियो !
काठमाडौं। बिहीबार दिनभर चलचित्र ‘आमा’को टिम कोटेश्वरमा थियो। कोटेश्वरमा बसर दिनभर पानी कुर्दा कुर्दा पानी परेन। त्रिभुवन विमानस्थलको रन वेसम्म परेको पानी कोटेश्वर चोकमा परेन। पानी नपरेपछि दिनभर टिम सक्रिय त भयो, तर काम हुनै सकेन।यस्तो समस्या ‘आमा’को टिमले भोगेको पहिलो पटक होइन। कैयौ पटक पानी नपर्दा यो समस्या परेको छ । जसलेगर्दा, चलचित्रको बजेट मात्र होइन काम गर्न पनि समस्या परेको छ ।
निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले भने–‘पानी पर्छ भनेर हामी रातको २ बजेसम्म बसेका छौ । तर, पानी नपर्दा दृश्य खिच्न सकिएको छैन ।’ चलचित्रको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ । अब, ३५ प्रतिशत दृश्यमा पानी चाहिन्छ । निर्देशकले भने–‘हामीलाई सानो पानी परेर मात्र हुँदैन । ठूलै झरी नै पर्नुपर्छ । तर, यसपटक पानी नपर्दा गाह्रो भयो । पानी पर्छ भनेर साउनमै छायांकन राखेको, झन् पानी नै परिदिएन ।’
शर्मिला पाण्डेको लगाननीमा बनेको यो चलचित्रको छायांकन असारको १६ गतेबाट सुरु भएको हो । तर, निर्देशकले सोचेअनुसार काम नहुँदा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । चलचित्रमा मिथिला शर्मा, सुरक्षा पन्त आमा र छोरीको भूमिकामा छन् ।चलचित्रको रिलिज मिति फागूण ९ गतेलाई तोकिएको छ । डीएस डिजिटलको ब्यानरमा यो चलचित्र बनिरहेको छ । अरु कुनै विकल्पमा पानी देखाएर चलचित्र खिच्न मिल्दैन र भन्ने प्रश्नमा दिपेन्द्र भन्छन्–‘क्लोज सर्टमा त संभव होला । तर, वाइड सर्टमा त पानी नै पर्नुपर्छ ।’